समाचार – onlinedarpan:
काठमाडौं — सुदुरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएका दीर्घ सोडारीलाई नेकपाले साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्कासन गरेको छ । नेकपाका स्थानीय नेताहरुको अनुसार, उनी लामो समयदेखि धनगढीकै एक महिलासँग प्रेम सम्बन्धमा थिए । त्यो स्थानीय नेता र कार्यकर्ताहरुलाई पनि पहिल्यैदेखि जानकारी थियो । यही विषय उनकी श्रीमतीले थाहा पाएपछि पटक—पटक विवाद पनि हुँदै आएको विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
अंगद यादव १७ कार्तिक नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर गाउपालिका गूठी परसौनीका सशस्त्र प्रहरी द्वारा १३ हजार ९ सय ५० रुपया बराबरको अण्डा नष्ट गरिएको छ । गए राति सशस्त्र प्रहरी निरिक्षक माधव पण्डिकको नेतृत्वमा गएको गस्ती टोलीले प्रतापपुर गाउपालिका वार्ड न.६ गुठी परसौनीमा भारत बाट अबैध रूपमा ल्याऊदै गरेको अण्डा नियन्त्रणमा लिएको थियो । आज बिहान विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले यही कात्तिक २३ गते बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा भाइटीकाको साइत उत्तम हुने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । समितिले शुभ बेलाको साइत दिएको जनाइएको छ । यस वर्ष यमपञ्चक अर्थात् तिहार विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Posted on October 31, 2018 October 31, 2018 Author onlinedarpan	Comment(0)
सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्री ठेकेदार पनि हुन् । उनीसहितको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले ठेक्का लिएका केही योजना अहिले उनकै मन्त्रालयमातहतमा पुगेका छन्  । खत्रीसहितको स्वामित्वको केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले हाल ६८ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतसँग सम्झौता गरेका ४ योजना निर्माणाधीन छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कात्तिक ५ गतेको विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
अछाम । मदिरा सेवन गरी बजारमा हो–हल्ला गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मंगलसेन–७ का जड्फे जैसी जरीवानाबापतको १ सय रुपैयाँ बुझाउन नसक्दा जेल चलान भएका छन् । स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ को दफा ९ (१) बमोजिम तिर्नुपर्ने १ सय रुपैयाँ तिर्न नसक्दा जैसी चार दिनका लागि जेल चलान भएका हुन् । जरीवानावापत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको १ विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…